“Waa inaan ixtiraamnaa go’aanka Eden Hazard” – David Luiz – Gool FM
“Waa inaan ixtiraamnaa go’aanka Eden Hazard” – David Luiz
(London) 15 Maajo 2019. Daafaca reer Brazil iyo kooxda Chelsea ee David Luiz ayaa sheegay inuu shaqsi ahaan ixtiraamayo go’aanka saaxiibkiis Eden Hazard, hadii ay dhacdo inuu ka dhaqaaqo garoonka Stamford Bridge.
Dhinaca kale David Luiz ayaa sheegay inuu jeclaan lahaa in Eden Hazard uu sii joogo kooxda ka dhisan galbeedka magaalada London ee Blues xilli ciyaareedka soo socda.
Wargeysyada dalalka Spain iyo England ayaa waxay xaqiijiyeen in kooxda Real Madrid ay go’aamisay heshiiska ay kula wareegi doonto saxiixa Eden Hazard, iyadoo la filayo in si rasmi ah loogu dhawaaqi doono, kaddib kulanka finalka Europa League ee dhex mari doono kooxaha Chelsea iyo Arsenal.
Hadaba David Luiz ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada caanka ah ee “Sky Sports” wuxuu kaga hadlay go’aanka uu Hazard ugu biiri doono kooxda Real Madrid wuxuuna yiri:
“Dabcan Eden Hazard waa ciyaaryahan weyn, waana arin aad u fiican inaad la ciyaarto kuwo ugu fiican, lakiin waxaan qabaa inuu go’aan ka gaaro mustaqbalkiisa”.
“Markii aan go’aansaday inaan ka tago kooxda Chelsea, wakhtigii aan u wareegay PSG, ma aheyn arin ii fudud aniga ahaan”.
“Asaaga ahaan wuxuu doonayaa inuu tijaabiyo loolan cusub, qof kastana wuu ixtiraamayaa, shaqsi ahaan aad ayaan ixtiraamaa isaga, waxaan sidoo kale ixtiraamayaa goa’aankiisa”.
“Hazard waa ciyaaryahan aad u wanaagsan waana saaxiib cajiib ah oo halkan yimid isagoo ah wiil da’ayar ah, haatana waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican adduunka”.
“Waxaan u rajeenayaa Eden Hazard waanaag oo dhan, laakiin waxaan rajeynayaa inuu sii wadan doono kooxda Chelsea”.
PSG oo qorsheeneysa inay qaado talaabo ay ku soo gabagabeeneyso rajada Real Madrid ay ka qabto adeega Mbappé